“နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေ အမှတ် (၁/၂၀၁၀) မှ (၅ / ၂၀၁၀ ) တို့အား ဥပဒေအနှစ်သာရ စကားရပ်များအရ အမြဲထည့်သွင့်ရမည့် (၁ /၂၀၁၀ မှ ၅/ ၂၀၁၀) ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ အာဏာတည်ရမည်) ထိုစကားရပ် မပါရှိသဖြင့် အတိုက်အခံများ အနေဖြင့် လိုက်နာရန်မလိုအပ်သေးပေ။
မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းနှင့် နည်းဗျူဟာလုပ်ငန်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး အဓိကထား ဆုံးဖြတ်ရန် လိုသည်။
“မီးပုံအား မငြိမ်းသတ်ဘဲ၊ မီးခိုးကိုသာ ယပ်ခတ် နေခြင်း ”
ဖြစ်ပြီး နအဖ အစိုးရ၏ အာရုံလွှဲနေခြင်းလမ်းစဉ်နောက် လိုက်ပါ မျောနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက နိုင်ငံတော်အာဏာအား မည်သူ့ကိုမျှ မလွှဲအပ်ဘဲ၊ ၂၀၀ဂခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အရိပ်ခိုပြီး နိုင်ငံရေးခရီးရှည် ဆက်လျှောက်သွားမည့်လမ်းစဉ်) ကို မြင်အောင်ကြည့် တတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ အရင်ဆုံး လေ့လာသုံးသပ်ရမည့် အချက်များမှာ
(က) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့သည် ၂၀၁၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသို့ ၀င် မ၀င် စဉ်းစားသုံးသပ်ရမည်။
(ခ) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့ နှစ်ဦးသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဘဲ နောင်တက်လာမည့်အစိုးရကို အာဏာလွှဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ မရှိကို စဉ်းစားသုံးသပ်ရမည် ။
(ဂ) န.အ.ဖ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသော ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းးပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့အား ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အရပ်သားသမ္မတ အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခြေအနေကို လေ့လာ သုံး သပ် သင့်သည်။
(ဃ) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး တို့သည် န.၀.တ အစိုးရအား မည်ကဲ့သို့ ဖြုတ်ချ၍ အာဏာလွှဲပြောင်းယူခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
(တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်များသည် ၄င်းတို့၏လက်ဝယ် အာဏာမရှိတော့သည့် အချိန်အခါတွင် နောင်တက်လာသည့် တပည့်များက ဆရာအား ချောင်ထိုးထားသည့်သာဓကများကို တွေ့မြင်ရမည်။ ဥပမာ။ ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း၏ မူလအာဏာရှိခဲ့ချိန်နှင့် နောက်ဆုံးခရီးထိကြည့်လျှင် တွေ့မြင်ရမည်။)
(င) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလက်ဝယ် လက်နက်နှင့်အာဏာ မရှိတော့သည့်အခါ ၄င်းအနေနှင့် မည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို ထည့်သွင်း သုံးသပ်၍ ဦးသန်းရွှေ၏ နေရာတွင်ဝင်ရောက်၍ စဉ်းစားသုံးသပ် ကြည့်သင့်သည်။
(စ) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့၏ တပ်တွင်းဆက်ဆံနေရသော အခြေအနေများကို ထည့်သွင်း သုံးသပ်သင့်သည်။
(ဆ) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို့လက်ထဲတွင် လက်နက်နှင့် အာဏာရှိနေသည့် အချိန်ကာလ၌ပင်လျှင် အတိုက်အခံပါတီနှင့် ကျေနပ်မှုမရှိသော ပြည်သူလူထုက လက်ညှိုးဝိုင်းထိုးနေကြတာ အာဏာလက်ဝယ်မရှိသည့်အခါ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်း စားသင့်သည်။
(ဇ) လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်နေသောအဖွဲ့နှင့် န.အ.ဖတို့၏ ရှေ့ဆက်ဆံရေးခရီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတို့၏ တုန့်ပြန်ချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်။
(၁) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၂၀၁၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်၍ အရပ်သားသမ္မတနေရာ ၀င်ရောက်နေရာယူလိုက်ပြီဆိုပါစို့
(က) ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ အခန်း (၃) - နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကဏ္ဍတွင် ပုဒ်မ (၅၈)၊ (၆၀/ခ) နှင့် ပုဒ်မ (၆၂) (၆၃) အရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေပိုင် အာဏာနှင့် ရာထူးကို စွန့်လွှတ်၍ သာမန်အရပ်သားသမ္မတ ကူးပြောင်းလာသည့်အခါ အရှိန်အမြင့်ဆုံးရရှိထားသော အာဏာနှင့် လက်နက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည့်အပြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ သမ္မတ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်အားချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ထားသည့် အခန်း (၅) အုပ်ချုပ်ရေး အခန်းအရ ပုဒ်မ -၁၉၉(က) မှ ပုဒ်မ (၂၁၅) အရ သမ္မတအာဏာသည် လက်ရှိ နအဖဥက္ကဌ၏ ရာထူး၊ ဂုဏ်ရှိန်ကို မမှီ ဖြစ်နေသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခန်း (၇) တပ်မတော် အခန်းကဏ္ဍရှိ ပုဒ်မ ၃၃၇ မှ ၃၃၉ ရှိ တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ တပ်မတော်အစဉ်အလာအရ သွားလေသူ ဆရာသမား ဦးစီးချုပ်ကို ချောင်ထိုးပြီး လှည့်မကြည့်တတ်သော အကျင့်နှင့် တပ်တွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် မောင်အေးတို့ အုပ်စုအခြေအနေ အပါအ၀င် အမြဲတမ်းဒုတိယနေရာ၌သာ နေခဲ့ရသော ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးသည် အရပ်ဖက်သို့ မပြောင်းဘဲ တပ်မတော်ထဲတွင်နေလျက် သမ္မတနှင့် အာဏာတန်းတူရှိသော စစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးနှင့် နေခဲ့သော်၊ ဒါမှမဟုတ် သန်းရွှေနှင့် မောင်အေး ဘောင်းဘီချွတ် ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့သော်၊ တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်အား မည်သူ့တပည့် ထားမလဲ ? ? ? ပြဿနာများ အခက်အခဲကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတဲ့ အခက်အခဲများကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဘ၀ မှ အရပ်သားသမ္မတဘ၀ သို့ မပြောင်းနိုင်သည့် အခြေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
(၂) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် မောင်အေး ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက်အရွေးမခံဘဲ နေခဲ့သည်ရှိသော်
(က) ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အစိုးရသစ်အား ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အာဏာလွှဲအပ်ခဲ့သော် သူတို့ နှစ်ဘ၀ ခရီးရှေ့ဆက် ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ ဆိုသည့်အချက် ပိုအရေးကြီးလာသည်။
(ခ) လက်နက်နှင့် အာဏာ လက်ဝယ်မရှိတော့သည့်အခါ အတိုက်အခံပါတီများ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်နေသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုနှင့် ပြည်သူလူထုက တုန်ြ့ပန်မှုကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။
(ဂ) တပ်မတော်အစဉ်အလာအရ အာဏာနှင့် လက်နက်မရှိတော့သော စစ်ဦးချုပ်ဟောင်းဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရမည့် အခက်အခဲများကို မည်သို့ရင်ဆိုင်မလဲ။
(ဃ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ မိသားစုဘ၀ကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲ ဆိုသည့်အချက်များသည် န.အ.ဖ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ထိုအိပ်မက်ဆိုး မက်စေခဲ့ပါတယ်။
(၄) န.အ.ဖအစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ၊ မောင်အေးနှင့် ကျန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ရှေ့ဘ၀ခရီးကို ဒီလို နိုင်ငံရေးခရီးရှည် လျှောက်တော့မည်သာ ဖြစ်ပါတော့သည်။ (နိုင်ငံရေး ထွက်ပေါက်သစ်)
(က) ၁၉၉၀ခုနှစ် န.၀.တ အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကဲ့သို့ “ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင် စစ်တန်းလျား ပြန်မည်” လို့ ပြောပြီး ကတိဖျက်၍ လူမိုက် ဆန် ဆန် အာဏာမလွှဲပဲ နေသည့် လမ်းကို လျှောက်တာ့မည် မဟုတ်။
(ခ) ပညာသားပါပါဖြင့် မဟားတရားအတင်းအကြတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန် အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြုခဲ့သော ၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အရိပ်ကို ခိုတဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးခြင်းကို လက်ကိုင်ထားတော့မည်။
(ဂ) ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁၄) ကူးပြောင်းရေးက ဥပဒေပုဒ်မ (၄၄၁)မှ (၄၄၄) (က)သည် န.အ.ဖ အစိုးရအတွက် အကာအကွယ် အားဆေးဖြစ်ခဲ့ပြီ။
(ဃ) ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၄၄၃)သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသော နောင်အသစ်တက်လာမည့် အစိုးရသစ်အား အာဏာမလွှဲပြောင်းပေးမှီ ကာလအတွင်း န.အ.ဖ အား ကြားဖြတ်အစိုးရသဖွယ် ဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။
(က) ၂၀၁၀ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှူကောင်စီ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁/၂၀၁၀ မှ ၅/၂၀၁၀ ကို (၈.၃.၂၀၁၀) နေ့တွင် အတိုက်အခံနိုင်ငံ ရေးပါတီနှင့် ပြည်သူလူထုကို စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်လာမလဲ
(၃) လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များ အုံကြွလာမည်။ တိုင်းပြည်ဆူပူလာမည်။ ၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ကြန့်ကြာလာမည်။
(၄) ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို တာဝန်ယူအချိန်သတ်မှတ် ကျင်းပပေးရမည့် တာဝန်ရှိသူမှာ န.အ.ဖ အစိုးရမဟုတ်တော့ပဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လူကြီးများသာဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၀ရွေးကောက်အပွဲအချိန် ကြန့်ကြာခြင်းသည် န.အ.ဖ အစိုးရကြောင့် မဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လူကြီးများ ၏တာဝန် ဖြစ်သည်ဟု လက်ညှိုးထိုးလွှဲချလို့ရသည့်အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်သည်။
(ခ) ယခင်ကတည်းက အာဏာမပေးချင်တဲ့ န.အ.ဖ ဘာလုပ်မလဲ၊ န.အ.ဖ သာလျှင် ၂၀၀၈ခုနှစ် အခန်း(၁၄) ပုဒ်မ (၄၄၃) အရ တရားဝင်ကြားဖြတ် အစိုးရဟု ကြွေးကြော်ပြီး နိုင်ငံရေး မိုင်ရှည်ခရီးဆက်လျှောက်ပြီပေါ့ ။ ။
(မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၀)